E-Journal: အချစ် ၊ အလွမ်း များ
ကိုတာတူးရေ ပုစ္ဆာနဲ့ ၀တ္ထုက တမင်ရေးထားတာမဟုတ်ရင် ပြင်ပေးနိုင်မလားလို့ပါ..ခံစားချက်ဆိုတာ အဲလိုပဲဗျာ။ ခြင်္သေ့ကျွန်းမှာ အလွမ်းတွေ ဝေသွားတဲ့ညနေပေါ့ဗျာ။
လွမ်းမောတမ်းတ ဖွယ်ရာ အချစ်တပုဒ်ပါ။
ရသကောင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင် ဒီနေရာကို အမြဲရောက်တယ်။
VBT တားမြစ်ထားသော ရဲ့ အမည်ရင်း---
နောက်တယောက် က အိမ်လွမ်းသူ---
အခု ရသ ရေးသူက ကိုတာတူး--
အဲဒီလက်ကလေးတွေ အနုပညာနဲ့ မကင်းကွာပါစေကြောင်း မျှော်လင့်ဆုတောင်းလျက်ပါ။
ထိုင်ကြည်. နေ လို.။ မဖြစ် သေးဘုး။ လက် ကလေး နဲနဲ သွက် ဘို.တော. လိုမယ်။
သံတမန် က may be ဆိုတာ Yes လို. အဓီပါယ် ရှိ သလို
စစ်သားရဲ့  yes ဆိုတာ yes ပါဘဲ.
မိန်း မပျူိူလေးရဲ. No ကတော.Yes ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
the author of "zero" is Min Khike Soe San
အရည်မရှိတဲ့ သံပရာသီးကို ရေစွတ်ပြီး ညှစ်ချင်နေတာ ကိုး..။
ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ နောက်တခါ ....ဘယ်သွားသွားခေါ်လို့ ဖြစ်ဘူးထင်ပ။
တကယ့် တကယ်တော့ ....
အဲ့ဒီနေ့က ကိုတာတူးဝယ်ခဲ့သော ကင်မရာ
(ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်နေကြသော ကောင်းမလေးတွေကို ညဘက်ရိုက်လို့မရတဲ့)သာလျှင် အပြစ်ရှိပါ၏....။
ကျနော့ ဒီစာစုလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး တောင်းပန်ချင်တာ အချို့ ရှိပါတယ်။
ကျန်တာတွေလည်း နောက်ပေါ်လာရင်တော့ ထပ်မံ တောင်းပန် ၊ဖြည့် စွက်ပေးပါ့မယ် ။
၁။ ပထမဆုံးကတော့ ကျနော့ ညီ မငယ် နိုင်း နဒီကို ပါ။ သူမက ကျနော့ကို အကြံပြုထားသောပို့စ် (ဆုံးမတယ် ပြောမှ မှန်မလားပဲ) http://ninenadi9.blogspot.com/2008/09/love-hope-life.html တင်ထားတာကို ကျနော်က မသိသေးပဲ ယခု ပိုစ်လေး ကို တင်မိပါတယ်။ ယောင်း မမြင်းစီး ထွက်တာ မဟုတ်ပဲ မတော် တဆ တိုက် ဆိုင်မှု့သာ ဖြစ်ကြောင်း မိနိုင်း အား သိစေချင်ပါသည် ။
၂။ ခုလို အသေးစိပ် ဖတ်သွားပြီး ပြင် ပြပေးတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ကိုရွာသားလေးရေ ။
ကျနော့ စက်က ပဋ္ဌ်ဆင့်တွေ ရိုက်တာ အဆင်မပြေတာနဲ့ ပဋ္ဌ်ဆင့်ကို ဖြည်ပြီး ရိုက်မိသွားလို့ပါ ။ ခု ပြင်ထားပြီး သွားပြီ အကို ။
အင်း ပေါ့ အကိုရာ လွမ်းတဲ့ရောဂါကတော်တော် ဆိုးတယ် ။ ခုထိ ဖြေဆေးကလည်း မရှိ ။ ဂိမ်းဆော့နေရင် သက်သာ သလိုပါပဲ ။ ဒါကလည်း ထင်ရုံပါ အကိုရာ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို ။
၃။ မသက်ဇင်ရေ ခုလို လာလည်ပြီး ဖတ်ရှု့ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွမ်း တာရယ် မောတာရယ်က ကျနော် ပဲ ဖြစ်မှာ အမေရေ ။ :D
ကျနောက ကိုဗာဘို လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုတားမြစ် ရဲ့ အမည်ကတော့ သူက ပို့စ် တစ်ခုရေးပြီး
၀ိုင်းတော်သားတွေကိုရော သူ့ကိုယ် သူပါ မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ကျနော်က တာတူးပါ။ အမမေးတာလေးကို ပိုစ့် တစ်ခုနဲ့ ကျနော် ဖြေထားပါတယ် အမရေ ။ http://ver-bo-ten.blogspot.com/2008/09/introduction-about-me.html
http://ver-bo-ten.blogspot.com/2008/05/blog-post_24.html မှာ အနည်းအကျင်း မိတ်ဆက်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
၄။ကိုမာရေးသျှင်ရေ ကျနော်လည်း အားနာလှပြီ ။ ရေးဖြစ်တာတွေကလည်း ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စဖြစ်နေ ၊ ပြီးတော့ အလုပ်ကများပေါ့ဗျာ ။ ပြန်လာနိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားနေပါတယ် ခင်ဗျာ။
၅။ အမ မခင်ဦးမေရေ ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ကျနော်က လက်ကတော့ အတော့ကို နှေးသည် ပြောရမယ် ။ပြီးတော့ ရေမြေခြားပြီ ဆိုတော့ မျှော်လင့်ချက်က ဝေေ၀၀ါးဝါးပေါ့ အမရယ်။ တစ်ကြိမ်သာ ပစ်သော ၊ တစ်စင်းတည်းသော မြှားသည် ထိချက်ကို တက်တက်စင်အောင် လွဲသော်လည်း ဖြေဆေး မရှိတော့ပါ။ ကိုယ့်ရောဂါ ကိုယ်သိသမို့ နောက်ဆုံးတော့လည်း ငါတို့က ဗြဟ္မ ပြည်က လာတာကွလို့ ကိုဗာဘိုတို့ ၊ ကို အိမ်လွမ်းတို့ကို လှောင်ပြောင်ဖြေသိမ့်ရင်း ပေါ့ အမရယ် ။ ကျနော့်
G-Hall သူရဲ့ No ကို Yes ပြောင်းဖို့ကတော့ မျှော်လင့်ရန် ရာနှုန်း မရှိသလောက် ပြောရမယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇွဲကတော့ မလျော့ပါဘူး အမရယ် ။ ဒီဘ၀ မဟုတ်လည်း နောက်ဘ၀ပေါ့ နော် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရေ ။
၆။ Tay ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ကျနော်လည်း အရင်နေ့ကတော့ ဆရာ မင်းခိုက်စိုးစံ ဆိုပြီး တင်ထားတာ။ ညကမှ သူငယ်ချင်းက မေးတာနဲ့ ကျနော်လည်း ဝေတေ ၀ါးတား ဖြစ်သွားလို့ ခုလိုလေး ပြင်ရေးလိုက်တာ။ ခုလို ထောက်ပြ ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရ ။ အမယ် မင်း မင်း ကိုအိမ်လွမ်းသူ ။ ဖွပါ့ ။ ကျုပ်ဘာသာ ကျုပ် လမင်းနဲ့ပင်လယ်ကို ဘယ်လောက်လှသလဲ ဆိုပြီး ဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ချင်လို့ မ လာတဲ့ ကင်မရာပါဗျာ။ သူပဲ ကမ်းစပ်မှာ ပဲတွေပေးပြီး ပုံတွေ စွတ်ရိုက်လာပြီးတော့ ။ တော်ကြာ ခင်ဗျားပြောမှ ကမ်းခြေမှာ လူတွေမလာရဲတာ ကျုပ်ကြောင့်ဆိုပြီး အမှုပတ်နေပါဦးမယ် ။ ဟွန်း
အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
အင်း။ ပိုစ့်ကိုဖတ်။ ကွန်မန့်တွေဖတ်လိုက်ရတာ ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အချစ်သည် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်။ လူအများစုတွင် ထိုခံစားချက် သဘာဝအရရှိနေတတ်သဖြင့် အချစ်အကြောင်းဆိုလျှင် စိတ်ဝင်စားကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီပိုစ့်ကို သဘောကျသည်။း)